भोलि(बिहिवार )बिहान ८ बजेर ४३ मिनेटदेखि खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने
प्रकाशित मिति : ९ पुष २०७६, बुधबार ०७:५०
काठमाडौँ, ९ पुस। पुस १० गते बिहान ८ बजेर ४३ मिनेटदेखि खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएको छ । काठमाडौँमा बिहान ८ बजेर ४३ मिनेट, महेन्द्रनगरमा ८ बजेर ३८ मिनेट र भद्रपुर झापामा बिहान ८ बजेर ४८ मिनेटबाट सूर्यग्रहण लागेको देखिने छ । काठमाडौँ र महेन्द्रनगरबाट ३९ प्रतिशत एवं भद्रपुर, झापाबाट ३६ प्रतिशत सूर्यग्रहण लाग्ने जानकारी बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. सनतकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
सङ्ग्रहालयबाट टेलिस्कोपको सहायताद्वारा सूर्यग्रहणको अवलोकन प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणलाई गराइने व्यवस्था मिलाएको जानकारी पनि उनले दिए । नेपालबाट बिरल छायाँ र खण्डग्रास मात्र देखिने छ । बिरल छायाँ सूर्य ग्रहण लाग्दा सुरुमा परेको छायाँ हो र यसलाई सामान्य रूपमा देखिँदैन । डा. शर्माका अनुसार सूर्यग्रहणलाई खाली आँखा, बाइनाकुलर वा टेलिस्कोप प्रयोग गरेर कदापि अवलोकन गर्नु हुँदैन । यसो गरेमा आँखा सदाका लागि बिग्रने सम्भावना रहन्छ । साथै एक्स रे प्लेट, ध्वाँसो लगाएको ऐना तथा पानीमा समेत सूर्यको प्रतिविम्ब अवलोकन गर्नु हुँदैन । हिमाल आरोहणमा प्रयोग गरिने विशेष प्रकारको गाढा रङको धातु लेपन भएको चस्माबाट मात्र यसको अवलोकन गर्न सकिन्छ, साधारण चस्माबाट यसको अवलोकन गर्नु हुँदैन । सूर्यग्रहणको समयमा मानवमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक आधार प्राप्त हुन सकेको छैन ।
यस्तो देखिने स्थानहरू साउदी अरबबाट सुरु भएर कतार, यूएई, ओमान, दक्षिण भारत, उत्तरी श्रीलङ्का, बङ्गालको खाडी, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, उत्तरी मेरियाना द्वीप, फिलिपिन्स हुँदै प्रशान्त महासागरको गुआम टापुमा पुगेर अन्त्य हुने छ । तर बिरल छायाँ भने पूर्वी युरोपका केही भाग, एसियाका अधिकांश भाग केही उत्तरी भागबाहेक, अस्ट्रेलियाको उत्तरी भागबाट देख्न सकिने छ । वलयाकार सूर्यग्रहण काठमाडौँबाट दृष्टिगत हुने छैन तर खण्डग्रास सूर्यग्रहणको रूपमा अवलोकन गर्न सकिन्छ । सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आउँदा चन्द्रमाले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई छेक्दा यसको छायाँ पृथ्वीमा पर्न गई सूर्यग्रहण हुन जान्छ । सूर्यग्रहण केवल चन्द्रमाको ‘न्यून मुन’ फेजमा मात्र लाग्न सम्भव हुन्छ । खण्डग्रास, खग्रास तथा वलयाकार सूर्य ग्रहण विभिन्न खगोलीय अवस्थामा निर्भर गर्छ । यस पटकको सूर्यग्रहणमा चन्द्रमा पृथ्वीबाट सबभन्दा टाढा पुगेको केही दिनपछि मात्र चन्द्रमाले सूर्यलाई छेक्ने हुँदा पृथ्वीबाट अवलोकन गर्दा यसले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई पूर्ण रूपमा नछेक्ने हुँदा सूर्य केवल रिङ आकारको गोलाकार रूपमा अवलोकन हुने छ । काठमाडौँबाट भने यसलाई केवल खण्डग्रासका रूपमा अवलोकन गर्न सकिने जानकारी डा. शर्माले दिए ।
पृथ्वीबाट सूर्य लगभग १५ करोड किलोमिटर टाढा छ । यसको व्यास पृथ्वीभन्दा १०९ गुणा ठूलो छ र चन्द्रमाको व्यास पृथ्वीको एक चौथाइ मात्र छ । तौल तीन लाख ३३ हजार गुणा बढी छ । यसको बाहिरी सतहको तापक्रम लगभग छ हजार डिग्री सेन्टिग्रेड र केन्द्रको तापक्रम एक करोड ५० लाख डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ । सूर्य पृथ्वीको सबभन्दा निकट रहेको एउटा सामान्य प्रकारको तारा हो । सौर्यमण्डलका सम्पूर्ण ग्रह आफ्नो कक्षमा परिभ्रमण गर्नुका साथै सूर्यको वरिपरि पनि परिभ्रमण गरिरहेका हुन्छन् । पृथ्वी आफ्नो कक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतिर परिभ्रमण गर्नुका साथै सूर्यको वरिपरि पनि परिभ्रमण गरिरहेको हुन्छ ।
सामान्यतया व्याख्या गर्दा सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा आएर पृथ्वीमा पर्ने सूर्यको प्रकाशलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा छेकेमा अर्थात् चन्द्रमाको छायाँ पृथ्वीमा पर्न गएमा छायाँ परेको स्थानमा सूर्यग्रहण लाग्न जान्छ । सूर्य ग्रहण खग्रास, खण्डग्रास वा वलयाकारको हुन सक्छ । पृथ्वीको एक स्थानमा खग्रास सूर्यग्रहण लागेपछि साधारणतया उक्त स्थानमा पुनः ३७५ वर्षपछि मात्र लाग्छ । चन्द्रमाको त्रिज्या पृथ्वीभन्दा धेरै सानो भएकाले चन्द्र र सूर्य गोलाहरूमा बाहिर स्पर्श रेखाद्वारा निर्मित शङ्कु छायाँ कोन सेडो भित्र पृथ्वी पूर्ण रूपले नपर्ने हुँदा पृथ्वीका केही निश्चित भागबाट मात्र सूर्यग्रहण अवलोकन गर्न सकिन्छ । ज्योतिषी दीपक सुवेदीका अनुसार सूर्यग्रहणको तीन दिन अघिदेखि तीन दिन पछिसम्म सुतक लाग्छ । कुनै राशिले पनि सूर्यग्रहण नाङ्गो आँखाले हेर्न नहुने र मेष, वृक्ष तथा मिथुन राशिलाई हानिकारक छ । त्यसपछि सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मक्करलाई पनि नराम्रो छ । नक्षत्रका आधारमा कर्कट, तुला र मीन राशिलाई भने हानिकारक छैन ।